WAQTI LUMISKA QORAALADDA SOOMALIAYA.pilot
Dunniddaan aynnu ku dhaqannahay way adagtahay in la hello qof caqli ku filan leh oo sabab la,aan door bidaya inuu dhulkiisa hooyo ka qaxxo, Kunna nolaado dhulal shisheeye oo ay af,Diin, Iyo dhaqanba ku kale duwan yahiin. Dhibaatooyinka kalifa in uu qofku go,aansaddo inuu ka socdaallo Ruktii uu ku barbaaray waa mid qofka qaxootigga ah oo kaliya uu qeexid dhab ah ka bixin karro.
Lakiinse waxaaa shaki ku jirin in go,aankaaan muhiinka ah ee uu qofku garayo ay ka danbeeyso arrimo dhaqaale,Bulshadeed ama siyasadeed. Inkastoo dadka soomaliyeed marka loo dhabbo gallo
Taariikhihii gumeysiga iyo suugaanta lagu tilmaamo iney yahiin dad dalkooga iyo dadkooga aad uu jecel oo aanu wax ku doorsan ayaa hadane waxaa dhacday in 15kii sanadood ee ugu danbeeysey Ay dadka soomalida ku abtirsadaa aduunka cirif walbaa gaareen, Socdaalkaas xad dhaafka ah ayaa waxuu sababay in wadammo badanni albaabadooda ka xirtaan soomalida maanta..
Hadabba aqristoow koox dhalinyarro ayaa dooni wada raacay oo ay ku tamashla tagayeen, Waxaayna tageen jasiirad ku taaal badda dhexe ayaamo markay nasteen oo ay guryahoodii ku soo noqonayeen ayay mowjad xoog lahi ka kacday badda. Nin ka mid ah dadkii asxaabta ahaa oo doonta saarnaa ayaa badii ku dhacay, Waxaaana la tagtay mowjadii habeenkoo gudcur dam ah, Waxaa ninkii aragiisa ugu danbeysay markuu bada ku sii dhacaayay. Mowjadii markii ay dagtay ayay dhalainyaradii isugu yimaadeen sagxaddii doonidda, Aaad ayay ugu murugoodeen qaar ka mid ahina aad ayay ugu ooyeen, Habeenkii inta ka seexatay aad bay uu yaraayeen.. Waagii markii uuu baryay
oo qoraxduna soo baxaday ayay qaar ka mid ahi dhalinyaradii ayay arken mowjad khafiifa oo wax soo sida waxaay uu maleeyeen qof. Mudo yar ka bacdi waxaay arkeen in ay mowjadu ay sido uu yahay ninkii saaxibkood ahaa ee habeennimadii ka dhacay doonta ee mowjadu la tagtay. Dhalinyaradii ayaa gabi ahaantood isa soo taagay doonta korkeedii qaar ka mid aah ayaa isu diyaariyey iney badda galaan oo ay saaxibkood ka soo saaraan. Naakhuudihii ayaa baroosinka uu aasay doonta, Dhalinyaradii dabaasha ku wanaagsanayd inaaney halkoodii ka dhaqaaqin ayay dhalinyaradii doonta saarnayd maqleen cod la hadlaya oo ay garan waayeen meesha uu kaga imaanayo, Ugu danbeyntii waxaay ogaadeen in codku dhinaca bada kaga imaanayo. Fajaciso ayay ku noqotay mid qudha oo hadla waa laga waayey hase yeeshee ugu danbeyntii waxaa hadalka ku soo baxay nakhuudihii oo yidhi " Lama arag nin badu liqdo oo isaga nool oo anay wax gaarin ka samata baxa".
Ninkaan aad soo celisay waa nin duq ah markaas saaxibadoodii sheegeen in aanu duqa dabaasha haba yaraatee aanu wax ka aqoon waa arin mucjiso noqon kartee bal wax nooga sheeg sida ay wax uu dhaceen iyo sida ay mowjadu uu tagtay ee anaa naakhuuda ahee ii sheeg? Hadaba waxaay naakhuudihii mowjadii ugu jawaabtay oo ay tidhi," Qofka sidiisa aan dabaasha aqoon waa kuwa aan aniga iyo noolaha igu dhex nooli jecel yahiin oo la yiraahdo raq iyo ruuxba waa la waayey hase ahaatee ninkaan isagoo bad qaba aan idinku soo celiyey waa mid noo cuntami waayey waa duq waa doqon ee sidaa ula socda. Aqristoow soomaalida waxaay hore uu tidhi "Doqoni kula tol ma aha" Waxaa kale oo ay yiraahdeen doqon hana gar-gaarin hana gargaarsan, Doqoni xarkaha lugu xeraayey ayay sidataa.
Aqriste waxaaa kaloo culimadda bulshaduna yiraahdaan"Cudur kasta dawo ayuu leeyahay marka doqonnimada laga reebbo". Aqrista waxaa qofka loogu bahan yahay inuu kala xusha saaxibadii iyo dadka uu la shaqaysanayo si uu ugu fogaado oo aan kale saari karin markuu wax yeelada geesanayo . Aqriste qofka bani,aadamka ah waxa uu sharaf iyo xurmo ku leeyahay oo lugu tix-galiyaa waa nabad in laga helaa naftaadane uu shaqayso oo dadka nabad gali.
Shaqadu ma aha oo kaliya wax la qabto oo laga hello dakhli, Balse waa cibaado, Shaqada qofka waxaay ka badbaadisaa cuduro badan oo nafta ah, Qofka inta uu shaqada gacanta ku haayo waxa uu ka badbaadayaa fikirka macna la,aanta ah, Inta uu howsha gacanta ku haayo waxa uu ka nabad galayaa xanta iyo waqti luminta wax aanay dani ugu jirin, Aqriste haday shaqadu tahay cibaaddo iyo nolol, shaqa la,aanta maxay noqon kartaa? Shaqa la,aanta markaan si kooban uu jaleecno waxaay qofka siisaa waqti badan oo firaaqo ah oo ka badan waqtigga uu qofku uu bahan yahay inuu nasto.
Firaaqadaa badanina waxaay ku kaliftaa inuu qofku helo wax uu ku buuxiyo, Haduu qofku markaa ka faa,iidaysto oo uu wax ka taran sado wax dhibaato ah ama waxyeelo ah uma yeelan karto.
Qofku hadaannu ka faa,iidaysanse, Waxa uu noqonayaa waqti cimrigiisa ka khasaaray oo aan dib ugu soo noqonayn, Waxaa kale oo uu halis uu yahay inuu ku kaco waxyaaba badan oo waxyeello ayahooddu noqon karro inta uu nool yahay inuu ku kaco oo aakharadiisa seejisa. Aqriste waxaa la nooga baahan yahay in aan waqtigeenna uu qaybinno sadex qeybood, Kuwaas oo kale ah Waqti cibaado, Waqti shaqo,Iyo waqti uu qofku ku nasanayo, Dhanka kale waxaad dalka ingaiiska ku arkaysaa dad ka faaidaysayo waxyaabaha aan kor ku soo sheegay iyagoo xili shaqaysanayo xilino cibaadaysanaya waana arin waajib ku ah qofka muslinka ah waana wax lagu farxo. Hadaba dhamaanteen waa inaan ka faaidaysanaa waqtiga oo aan iska daynaa xanta iyo xaasidnimada:::::